Ebuno | အွန်လိုင်းငွေကောက်ခံမှု ယနေ့ငွေရှာပါ!
Ebuno ဖြင့်သင်အလွန်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းသောစစ်တမ်းများကိုပြီးဆုံးခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းတွင်ငွေရှာနိုင်သည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကြားအောင်သင်အမှန်တကယ်ငွေရှာနိုင်သည်။
Ebuno အတွက်စာရင်းသွင်းခြင်းအားဖြင့်သင် Ebuno ၏သဘောတူမှုကိုလက်ခံသည် ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ & စည်းကမ်းများ.
၅ မိနစ်အတွင်းသင်မတွေ့ပါကသင်၏ spambox ကိုစစ်ဆေးပါ။
အပိုဆောင်းထောက်ခံမှုသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဘေ့စ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါက activation အီးမေးလ်အသစ်တစ်ခုပေးပို့သည်။
သင်၏ပရိုဖိုင်နှင့်လိုက်ဖက်သည့်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများကိုဖြေ ဆို၍ ငွေပေးချေပါ။
Paid Surveys ဆိုတာဘာလဲ။
လခပေးသောစစ်တမ်းသည်ပုံမှန်စစ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းအတွက်ဆုကိုပေးသည်။ စားသုံးသူများအနေဖြင့်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းနှင့်သူတို့ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများကိုသိရန်နှစ်စဉ်ပိုက်ဆံများစွာသုံးစွဲသောကုမ္ပဏီများရှိသည်။
စစ်တမ်းတစ်ခုစီ၏တန်ဖိုးသည်အချက်အလက်များစွာအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုပြီးမြောက်ရန်အချိန်ယူရသည်။ များသောအားဖြင့် ၁၀ မိနစ်တိုင်းတိုင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာရပေမယ့်များများရနိုင်ပါတယ်။ သင်မေးခွန်းများဖြေရန်မည်မျှမြန်သည်ပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။
ဘယ်လိုပေးဆောင်စစ်တမ်းများ Ebuno အပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်
ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ ထိုသို့ပြုရန်နည်းမှာစားသုံးသူများထံမှသူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုမေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ကုမ္ပဏီများစွာသည်သင်၏ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သောတန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုရရှိရန်အတွက်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာပေးချေသောစစ်တမ်းများအတွက်သုံးစွဲကြသည်။ ကုမ္ပဏီတခုကစစ်တမ်းကောက်ယူသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများထံတွန်းထုတ်ပြီးမေးခွန်းအနည်းငယ်ဖြေဆိုရန်မက်လုံးပေးသည်။ သင်စစ်တမ်းအနည်းငယ်ကိုဖြေပြီးသည်နှင့်သင်၏ဝင်ငွေကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေသည့်ပရိုဆက်ဆာသို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ယနေ့မှတ်ပုံတင်ပါ သင်၏ပထမဆုံးလစာစစ်တမ်းသို့မ ၀ င်ခင် ၂-၃ မိနစ်သာကြာသည်။
Ebuno ရှိစစ်တမ်းများကိုဖြေခြင်းဖြင့်သင်ငွေရှာနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းမှအခြားစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကိုဖြေဆိုရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်ခြားနားချက်မှာသင်လုပ်ရန်ငွေရခြင်းဖြစ်သည်။ သင်မည်မျှဝင်ငွေရှိသည်၊ သင်မည်မျှစစ်တမ်းကောက်ယူမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Ebuno သည်ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ စ၍ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းတွင် ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ စင်မြင့်သည်အထူးသီးသန့်ဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးစစ်တမ်းကိုမစတင်ခင်၊ သင့်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအခွင့်အရေးများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံအချက်အလက်အချို့ကိုဖြည့်စွက်ရုံသာဖြစ်သည်။ စတင်ရန်နှင့်ငွေအနည်းငယ်စတင်ရရှိရန်အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါသည်။
ဒါကြောင့်သင် Ebuno မှာပေးသောစစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှမည်မျှရနိုင်သနည်း။
စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြင့်သင် ၀ င်ငွေရရှိရန်မှာအချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မက်လုံးသည်မေးခွန်းများ၏နက်ရှိုင်းမှု၊ အရည်အချင်းပြည့်မီရန်မည်မျှခက်ခဲပြီးစစ်တမ်းသည်မည်မျှကြာသည်ကိုမူတည်သည်။ သင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီများသည်စားသုံးသူအမျိုးအစားကိုရှာဖွေနေသည့်အတွက်သင်ရိုက်ထည့်သောစစ်တမ်းများအားလုံးအတွက်သင်အရည်အချင်းပြည့်မှီမည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ဝင်ငွေကို PayPal သို့မဟုတ်ထုတ်ယူခြင်းကဏ္ withdraw ရှိလက်ဆောင်ကဒ်များသို့ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Ebuno ကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအသုံးပြုပါက၊
SwishPanelen သည် Ebuno ၏ မိတ်ဖက်ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဖတ်ရန်၊ သို့သွားပါ။ SwishPanelen.se
အွန်လိုင်းမှကောက်ယူသောစစ်တမ်းများ - ဤသည်မှာ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်
ငါတို့ပြီးသွားပြီ $ 100.000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန် 100.000 + အဖွဲ့ဝင်
ဘာတွေလဲ သငျသညျ စောင့်နေတာလား
ပါဝင္ရန္ အီဘိုနို ဒီနေ့မင်းရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကနေပိုက်ဆံရအောင်လုပ်ပါ